Agoonta gobolka Gedo, gaar ahaan Ceelcadde (SAWIRRO + VIDEO) - calanka.com
Agoonta gobolka Gedo, gaar ahaan Ceelcadde (SAWIRRO + VIDEO) (Calanka.com) - Posted at 24/03/2013 By Admin
Caawi agoonta gobalka gedo agoontaan ayaa ku nool magalaada ceelcade agoontaan waxay ka kala yimaadeen dhamaan degmooyinka iyo degaanada gobalka gedo.waxayna ku noolyihiin magaalada ceelcadde.
Agoontaan waxay sugayaan jaliyadaha dibada ee somaliyeed gaar ahaan kuwa gedo.iyo cidwalba oo dar alle wax ulabaxaysa .agoonta ayaa tiradooda waxay gaaraysa 50 waxayna wax ka bartaan dugsiga hoose iyo dhexe ee magaalada ceelcade sidoo kale waxay waxka bartaan dugsiga taxfiidka quranka ,
agoonta ayaa halkii cunug waxaa ku baxa 40$(dolar) aqoonta ayaa waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal aqoontaan ayaa da,doodu udhaxaysa 6. ilaa 15 sano.
sidoo kale agoontaan ayaa nolashoodu ku tiirsantahay deeqaha dadka wax baxsada ee ilaahay tusay nimcada ayleedahay sadaqada.Xikmada kujirta sadaqada inta badan dadku mawada fahmaan lakiin qofkii fahmaa ma,joojiyo Waxbixinta ilaahay dartiis ah .ilee waxuu ku arkay faaiidooyin xaqiiqo ahe .Dadoow bal tijaabiya.waad arki doontaane idinkoo ilaahay dartii ubixinaya ha yaraato ama ha badnaatee.
Sadaqadu waxay dambiga qofka u baabi,isaa sida biyaha dabka udamiyaan Qofka nolasha ku ciriirsanto waasac ayaa looga dhigaaa nolasha Kii caafimaadka ka xumaana caafimaad ayaa lagu siiyaa kii murugo iyo cabsi haysayna wanaag iyo farxad ayaa loogu badalaa Dadoow .bixiya waxuu ilaahay idin siiyay ee khayrka ah idinkoon bakhaylayn Oo Bixinayn kii xumaa ama hadii idinkaba la idin siiyo aadan qaadateen ama aadan.
ku qanacdeen Bixiya .waxii khayr ah ee ilaahay dhulkiisa idinkaga soo saaray .ee aad haysataan Ilaahaywaxuu idin siin ajir laban laaba akhiro iyo aduunba Qofkii wakiisha hal agoona .si ilaahay dartii ah waxuu lamidyahay qof aduunka oodhan nooleeyay Hadaba wakiilo ama noolee hal agoon .hadaad awoodana kabadi .Halkii agoon waa 20 doolar bishii Meeshan kadhagayso. muxaadaro kahadlaysa. wanaaga sadaqada.
Hadaba meeshan kala xiriir masuuliyiinta aqoonta Gedo
Masuulka aqoonta ee dibada : Cabdirisaq maxamed barqadle (kali) Telfoon: 004790248189
Masuulka aqoonta ee somaliya : Shekh ismaciil busuri Telfoon: 00252615459051
Emailka ogoonta: gagaar1@hotmail.com